मैले जनता लाई दिएको बचन पूरा गरे! अझै यस्तो धेरै पुननि’र्माण हरुको उ’द्घाटन गर्न बाकी छ ! प्रधानमन्त्री ओलि:: Mero Desh
मैले जनता लाई दिएको बचन पूरा गरे! अझै यस्तो धेरै पुननि’र्माण हरुको उ’द्घाटन गर्न बाकी छ ! प्रधानमन्त्री ओलि
Published on: १२ बैशाख २०७८, आईतवार ०३:२४
काठमाडौं । २०७४ सालको तीनै तहको निर्वाचनमा एमाले को घो’षणापत्र जस्तै ब्राण्ड गीत बनेको थियो- बद्री पंगेनी र प्रिया भण्डारीले गाएको सैं पनि एमाले, मै पनि एमाले गीतको एउटा बोल थियो- भत्किएको धरहरा बनाउने कुरा, एमालेको सरकार आए हुन्छ त्यो नि पूरा एमालेको घो’षणा पत्रमा समेत समेटिएको र एमाले पं’क्तिको मुखमा झुण्डिए को त्यो गीतको एउटा बोल अब पूरा भएको छ ।
सं’योग कस्तो भने नेकपा खारेज भएर एमालेकै सरकार बनेका बेला धरहरा नि’र्माण पूरा भएको छ ! प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान शनिवारबाट पूरा भएको छ । २२ तले धरहराको उ’द्घाटन गर्दै ओलीले आफूले जनता स’मक्ष गरेका बाचा पूरा गर्दै आएको बताए ।
काठमाडौं । २०७४ सालको तीनै तहको निर्वाचनमा एमाले को घोषणापत्र जस्तै ब्राण्ड गीत बनेको थियो- बद्री पंगेनी र प्रिया भण्डारीले गाएको सैं पनि एमाले, मै पनि एमाले गीत को एउटा बोल थियो-भत्किएको धरहरा बनाउने कुरा एमा लेको सरकार आए हुन्छ त्यो नि पूरा ।
एमालेको घोषणापत्रमा समेत समेटिएको र एमाले पंक्तिको मुखमा झुण्डिएको त्यो गीतको एउटा बोल अब पूरा भएको छ संयोग कस्तो भने नेकपा खारेज भएर एमालेकै सरकार बनेका बेला धरहरा निर्माण पूरा भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको ‘म बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान शनिवारबाट पूरा भएको छ ।
२२ तले धरहराको उद्घाटन गर्दै ओलीले आफूले जनता समक्ष गरेका बाचा पूरा गर्दै आएको बताए ।भत्किएको धरहरा बनाउने अभियानको शुरु गरेका ओली २०७३ सालमा सत्ताच्यूत भएपछि धरहरा नि’र्माण पनि अलपत्र परेको थियो । सरकारमा ओली र पुनःनिर्माण प्रा’धिकरण मा सुशील ज्ञवालीको पुनरागमनसँगै रफ्तार लिएको धरह रा पुनःनिर्माण लगभग सम्पन्न भएको छ ।
शनिवार एक समारोहकाबीच पुनर्निर्मित धरहराको प्रवे’श द्धारमा राखिएको शिलालेखको प्रधानमन्त्रीले अनावरण गरि धरहराको ऐतिहासिक धरहराको समुद्घाटन गरेका हुन् त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले लिफ्टबाट धरहराको २० औ तला मा पुगेर पुष्पपृष्टी गरेका थिए । २०७२ बैशाख १२ गतेको महाभुकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको धरहरा पुर्ननि’र्माणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ फागुन ४ गते ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियानको घोषणा गरेका थिए ।
२०७५ साल पुस ५गते प्रधानमन्त्री ओलीबाट नै सिलन्यास गरिएको पुनर्निर्मित धरहराको शनिवार प्रधानमन्त्री ओली बाट नै समुद्घाटन भएको छ । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकर णको नेतृत्वमा पुनर्निर्मित धरहराका लागि ३ अर्ब ४८ करो ड रुपैयाँमा ठेक्का दिईएको थियो । धरहराको २२ औै तला मा पुरानो धरहराबाट निकालिएको पुरानो शिवलिंङ्ग राखि एको छ ।
बाहिरबाट देखिदाँ ११ तले रहेपनि भित्र २२ तला रहेको छ । त्यसमा २ वटा लिफ्ट राखिएको छ । जमिन मुनि २ तला बनाईएको छ । ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धरहराको वरपर विश्राम स्थल सहितको बगैचाको हुनेछ ! सेयर
भने संक्षित ऐतिहासिक सुनधारामा २४ सै घण्टा पानी आउने व्यवस्था मिलाईएको छ । त्यसैगरी ४ सय गाडी र ७ सय मोटरसाईकल पार्किङको पनि व्यवस्था छ । धरहराको पुर्ननिर्माणमा मैलिकताको सं’वद्र्धन गर्दै आधुनिकताको प्रचुर प्रयोग गरिएको छ ।